Nhau - China Yakakura Kupfuura Kompost Turner-M6300
China Chikuru Chikuru Kompomputa Turner-M6300
Mhinduro kubva kuMutengi
Kushanda Kero: Ipurazi rezvipfuyo kuchamhembe kweChina
Main Raw zvinhu: Organic mombe mupfudze, hwai mupfudze
Pagore Kugona KweMombe Manyowa: 78,500 matani
Sekureva kweChina Ministry of Agriculture, China inogadzira angangoita mabhiriyoni mana matani emarara emhuka gore rega. Sekurima kukuru kwezvipfuyo kuchamhembe kweChina, kushandisa mushwa wemombe uyu kwakakosha. Nerubatsiro rwe TAGRM yemombe mupfudze musanganiswa, purazi rezvipfuyo rinokwanisa kushandura, kusanganisa, kusanganisa, kupwanya uye nekuisa oxygenate iyo yakaoma organic zvinhu zvinosanganisira mombe yemombe, mufudzi wemakwai, mashanga uye zvimwe zvinhu, uye vovaita iwo akakosha manyowa fetiraiza.
Turning Machine: TAGRM compost Turner M6300
Kushanda Upamhi: 6500mm
Kushanda Kureba: 2500mm
Kushanda Kugona: 3780m³ / h
Seyakakura kwazvo bio compost fetiraiza Turner muchina, TAGRM's compost inogadzira muchina M6300 yakagadzirirwa kugadzira kusvika ku 3780 cubic mita yemanyowa paawa zvichienderana nerudzi uye saizi yekutendeuka. Dhiramu-dhizaini yemhepo inodzungudza inoratidzira yakatetepa simbi dhiramu ine mafirita ayo anosimudzira iyo kompositi Window. Inotorawo hydraulic control roller kusimudza, kuomesa uye kuomesa musono simbi chubhu, uye roller yayo ine yakasimba ngura-inopesana nemanganese simbi banga. Sayenzi dhizaini dhizaini inobvumira iyo kompositi Turner kupwanya iyo mbishi zvinhu pa1/1000 yekupararira kweiyo mbishi inosanganisira yakazara yunifomu kusanganisa nekusimudzira, pamwe ne oxygenating uye kutonhora.
TAGRM ine chinangwa chekuchengetedza nyika yepasi. Nekubatsira & kukurudzira vanhu pasirese kuti vashandise zvirinyore marara edu, senge tsvina yemasipareti, swill uye tsvina yekudya, tsvina yemhuka, nezvimwewo, TAGRM iri kuyedza napose painogona kuchengetedza pasi redu, pamwe nekupa rubatsiro rwakanyanya kumakambani akakodzera. .
Dzvanya apa kuti uwane rumwe ruzivo nezve TAGRM M6300 zvipfuyo zvinotendeuka kana yevatengi mhinduro vhidhiyo yeM6300.
Post nguva: Jul-22-2021